आज सोमबार, राशिफल हेरेर जान्नुहोस् कस्तो छ त तपाईको आजको दिन ? « Sansar News
आज सोमबार, राशिफल हेरेर जान्नुहोस् कस्तो छ त तपाईको आजको दिन ?
२९ मंसिर २०७७, सोमबार ०७:५७
गोपनीयता बाहिरिनाले काममा बाधा पर्नेछ । दौडधुपमै समय बित्नेछ भने आँटेको काम स्थगित हुन सक्छ । आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउने चेष्टा गर्लान् । मिहिनेत गरीकन चिताएको मूल्य प्राप्त नहुने देखिन्छ । अध्ययनमा बाधा पुग्नेछ भने अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ । वादविवादले समस्या निम्त्याउन सक्छ । हुलमुलमा धनमाल जोगाउन सजग रहनुहोला ।
परिवारजनको साथले उत्साहित भइनेछ । भौतिक साधन जुट्नेछ भने आम्दानी बढाउने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ । कामबाट फुर्सदिलो भइनेछ । व्यापार–व्यवसायमा लाभ हुनेछ । व्यावसाय विस्तारका लागि यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ । मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ। आयआर्जन बढ्नुका साथै उपहारसमेत प्राप्त हुने समय छ ।
स्वास्थ्य–चिन्ताले सताउन सक्छ । हल्लाको पछि लाग्दा दुःख पाइनेछ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि काममा समस्या आइपर्ला । बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले फाइदा दिलाउनेछ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुगिनेछ। प्रतिस्पर्धाको दौड जित्न सकिनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
परिस्थितिवश आँटेको काममा बाधा हुन सक्छ । हल्लाको पछि लाग्दा दुःख पाइनेछ । स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ताले सताउन सक्छ । समयको तालमेल नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ । अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला । प्रतीक्षित नतिजाले कम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति निम्त्याउन सक्छ । मेहनतले परिस्थितिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ । नयाँ काम थाल्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला ।
आवेशमा काम गर्दा विवादमा परिनेछ । दाजुभाइमा केही असमझदारी देखापर्न सक्छ । आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले समेत फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् । मौका आए पनि काम थाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला । साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । प्रतिपक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ ।
समयमा वचन पुर्याउन नसक्ता अरूले आलोचना गर्न सक्छन् । बेसुरमा बोल्ने बानीले वादविवाद निम्त्याउन सक्छ । मिहिनेत गरीकन चिताएको मूल्य प्राप्त नहुने देखिन्छ । अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला । ईर्ष्या गर्नेहरूले पनि बिनाकारण सताउन सक्छन् । महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । परिस्थितिको बन्धनले स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याउन सक्छ ।
अवसर प्राप्त भए पनि परिस्थितिवश काममा बाधा होला। बेसुरको निर्णयले समस्या निम्त्याउनेछ । आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ । तर शुभचिन्तकहरूले अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिनेछन् । दोहोर्याएर प्रयास गर्दा रोकिएको काम बन्नेछ । बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ । आफ्नो सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला ।
भैपरी आउने खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ । परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला । प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन् । तापनि, समस्या पर्दा सहयोग गर्नेहरू भेटिनेछन् । खर्च लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम फेला पर्न सक्छ । चुनौती पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ । टाढाका साथीभाइको निम्तो प्राप्त हुने समय छ । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । चल–अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ । पछिसम्म फाइदा हुने कामको जग बसाउने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ ।
पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने मिहिनेत गर्दा उपलब्धिको स्रोत पनि प्राप्त हुनेछ । तर, अरूका काममा समय खर्चनुपर्दा आफ्ना काम रोकिन सक्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त भए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नमा बाधा हुनेछ । परिस्थितिवश आफन्तबाट टाढिनुपर्ने हुन सक्छ । तापनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । प्रतिष्ठित कामले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ ।
शारीरिक कमजोरीले केही चिन्ता बढाउन सक्छ । बाध्यताले अलमल्याउन सक्छ । अरूका लागि समय, धन र बुद्धि खर्चनुपर्ला । अरूका काममा समय खर्चनुपर्दा आफ्ना काम रोकिन सक्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त भए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नमा बाधा हुनेछ । परिस्थितिवश आफन्तबाट टाढिनुपर्ने हुन सक्छ । तापनि, लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ ।
२०७७ मंसिर २९ गते, सोमवार, (१४ डिसेम्बर २०२०)
तपाईको आज (आइतबार) को राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ त शुभ ?